Warshadaha Xashiishadda Israel ayaa isu diyaarinaya inay si buuxda sharci u noqdaan • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Warshadaha xashiishadda ee Israa’iil waxay isu diyaarinaysaa inay si buuxda u sharciyeeyaan
Warshadaha xashiishadda ee Israa’iil waxay isu diyaarinaysaa inay si buuxda u sharciyeeyaan
albaabka daroogada December 23 2020
maqaal by daroogada December 23 2020
Warshadaha xashiishka ee sii kordhaya ee Israel ayaa hadafkoodu yahay inay balaariyaan wax soo saarkooda, waxsoosaarkooda iyo dhoofintooda iyadoo dalku isu diyaarinayo inuu sharciyeeyo marijuanaha madadaalada bilaha soo socda.
1 Horumar wanaagsan oo loogu talagalay warshadaha xashiishadda Israel iyo adduunka
2 Warshadaha xashiishadda Israel waxay abuuri doonaan balaayiin iib ah
3 Waxaa suurtagal ah in markii dambe la ballaariyo warshadaha xashiishadda Israel ee suuqa Yurub.
Hagit Weinstock waa qareen ku takhasusay qawaaniinta xashiishadda iyo isla aasaasaha shirkadda sharciga ee fadhigeedu yahay Tel Aviv Weinstock-Zehavi & Co. Waxay ku fadhidaa tiro guddiyo dawladeed ah oo ka shaqeeya dardargelinta dadaallada sharciyeynta.
"Waxaan ka arki karaa guddiyada inaan ka mid ahay in qof walba uu riixayo in sharciyeyn la sameeyo," ayuu yiri Weinstock. Waxaan horey u diyaarinay sharci.
Sharcigan ayaa dhigaya in dadka Israa’iiliyiinta ah ee ka weyn 21 sano loo ogol yahay inay isticmaalaan xashiishka kana iibsan karaan dukaamada loogu talagalay. Si kastaba ha noqotee, sigaar cabista goobaha dadweynaha waa mamnuuc.
Shirkadda Weinstock waxay horeyba ula shaqeysay daraasiin shirkado Israel iyo caalami ah iyo maalgashadayaal ku sii kordhaya waaxda marijuana. In kasta oo ay xasillooni darradu ka jirto dawladda Israa’iil ee hadda jirta - haddana waxa laga hadlayaa wareeg kale oo doorasho ah - waxay rumaysan tahay in sharciyeynta ay u socon doonto sidii loogu talo galay bilaha soo socda.
"Labada dhinacba way isku raaceen arrintaan," ayuu yiri Weinstock. "Dhamaantood waxay saxiixeen bayaan sheegaya in tani ay noqon doonto arin ay taageeri doonaan si aanan wax khatar ah ugu qabin dowladaan iyo tan xigta."
Horumar wanaagsan oo loogu talagalay warshadaha xashiishadda Israel iyo adduunka
Toddobaadkii hore, Wasiirka Caafimaadka Yuli Edelstein wuxuu soo bandhigay isbeddel sharci ah oo u oggolaanaya isticmaalka CBD (cannabidiol) - mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan ee xashiishadda - alaabta la isku qurxiyo iyo cuntada.
Guddiga Caafimaadka ee Knesset ayaa ka doodi doona isla markaana ansixin doona isbeddelka toddobaadkan, taas oo macnaheedu yahay in alaabada lagu soo daro CBD ay dhowaan ku dhici karto khaanadaha dukaamada waaweyn ee dalka oo dhan.
Kormeerkan weyn, guddi ka socda Qaramada Midoobay ayaa dhowaan u codeeyay in marijuana caafimaad laga saaro liiska dawooyinka adduunka ugu halista badan, halkaas oo lagu sifeeyay tan iyo 1961.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay soo jeedisay Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxayna wadada u xaari doontaa in baaritaan lagu sameeyo xashiishadda caafimaadka ee meelo badan oo adduunka ah.
Weinstock waxay rumeysan tahay in go'aannadan dhowaanahan ay yihiin bilowga isbeddelka ballaaran ee aragtida adduunka ee ku wajahan xashiishadda.
"Dhammaan sharciyada ayaa isbedelaya adduunka oo dhan laga bilaabo Maarso," ayay tiri.
Warshadaha xashiishadda Israel waxay abuuri doonaan balaayiin iib ah
In kasta oo ay qaadan karto illaa hal sano sharciyada madadaalada ee la soo jeediyay inay ka dhaqan galaan Israel, warshadaha xashiishadda ee Israel ayaa durbaba bilaabay inay dejiyaan istiraatiijiyado mustaqbalka ah.
Waxaa la aasaasay seddex sano ka hor, Intelicanna waa beeraha ku dhow magaalada bartamaha Israel ee Ra'anana, waxay kordhisaa 5-10 tan oo xashiishad caafimaad sanad walba. Shirkaddu waxay isticmaashaa tiknoolajiyad iftiin gaar ah oo u ekeysiinaysa qorraxda dabiiciga ah si ay u hagaajiso xaaladaha koraya.
"Waxaan diyaar u nahay inaan kordhino cabirkeena cabirkeena ilaa iyo inta la dhameystirayo," ayey tiri Yona Levy, gudoomiyaha Intelicanna ahna aasaasaha aasaaskeeda, mar ay dhowaan booqdeen xarumaha shirkada.
Inkasta oo suuqa caafimaadku uu hadda yahay NIS 750 milyan (190 milyan oo euro), Levy wuxuu rumaysan yahay in sharciyeynta xashiishadda madadaalada ay balaayiin doollar ku gelinayso dhaqaalaha Israel.
"Waxaa jira qiyaastii qiyaastii 7 bilyan ilaa 9 bilyan oo sheqel (€ 1,7 bilyan ilaa 2,2 bilyan) sanadkii oo lagu kharash gareeyo suuqa madow," ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in Intelicanna ay sidoo kale baareyso inay alaabteeda keento Yurub. si loo dhoofiyo.
Warshadaha xashiishadda Israel waxay abuuri doonaan balaayiin iib ah (afb)
Shirkado kale ayaa sidoo kale isku diyaarinaya isbedel ku yimaada warshadaha xashiishadda Israel.
Daawada Univo, oo ku taal koonfurta magaalada dekedda ah Ashkelon, waa mid ka mid ah soo saarayaasha xashiishka ugu waaweyn dalka. Shirkadan oo la aas aasay sanadkii 2016-kii ayaa ku takhasustay soo saarista iyo ka iibsiga xashiishadda beeraleyda dalka oo dhan. Sanadka soo socda waxay rajeynayaan inay koraan culeyskooda.
"Haddii ay jirto sharciyeyn buuxda oo dadka da'doodu ka weyn tahay 21 sano ay isticmaali karaan alaabtan, waxaan u maleynayaa inay wax weyn u noqon doonto dhaqaalaha," ayuu yiri Golan Bitton, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda iyo aasaasaha Univo Pharmaceuticals.
Univo hadda waxay xashiishad caafimaad siisaa 95 farmashiye oo dalka oo dhan ah, laakiin waxay billowday inay soo saarto noocyo cusub oo madadaalo ah.
"Waxaan haysannaa dhammaan alaabada ceyriinka ah, waxaan haysannaa xarumo wax soo saar iyo wax-soo-saar," ayuu yiri Bitton. "Waxaan haysannaa kaabayaal dhaqaale oo loo baahan yahay si aan toos ugu tagno dukaamada farmashiyaha."
Waxaa suurtagal ah in markii dambe la ballaariyo warshadaha xashiishadda Israel ee suuqa Yurub.
Sida Intelicanna, Univo sidoo kale waxay baareysaa fursadaha dhoofinta alaabada UK iyo suuqyada kale ee Yurub. Si kastaba ha noqotee, xeerarka soo dejinta iyo dhoofinta xashiishadu waa muuqaal sharciyeed aad u adag oo lagu dhex maro.
Waddan kasta wuxuu leeyahay xeerar u gaar ah oo soo dejinta iyo Israa'iil waxay bixisay iftiinka cagaaran dhoofinta dhowr bilood ka hor.
Sida laga soo xigtay Weinstock, oo ka tirsan shirkadda sharciga ee Weinstock-Zehavi & Co., dhowr shirkadood ayaa horey u codsaday rukhsad waxayna bilaabeen inay aasaas u dhigaan dhoofinta Yurub, oo ay ku jiraan Cronos Israel iyo Cannasure Therapeutics.
Soo dejinta Israel waxay u egtahay inay noqon doonto mid aan macquul aheyn mustaqbalka dhow, ayay raacisay, gaar ahaan dadka beeraleyda ah waxay ka codsanayaan dowladda inay qaado talaabooyin ilaalin ah.
“Ma dooneyno inaan dilno warshadaha xashiishadda ee Israa’iil, sidaa darteed way adkaan doontaa in xashiish la galiyo Israa’iil,” ayuu yiri Weinstock. "Dagaalku wuxuu billowday shan sano ka hor, laakiin waxaan u maleynayaa in kan ugu xoogan, kan ugu tayada iyo tayada fiican uu sii noolaan doono."
Ilaha waxaa ka mid ah CannabisBusinessExec (EN), Harris Bricken (EN), Mondaq (EN), TheMedialine (EN), YnetNews (EN)
Canna-Techcannabisbeerista cannabiscannatechgo'aan qaadashoEuropaIsraa'iilsharci ahaansharci-dejintasharcigabeerista cannabis
Marijuana Ma Kordhisaa Rabitaanka Galmada?
Toddobada nooc ee ugu fiican kratom ee xoogga, tamarta iyo diiradda
Bukaanku wuxuu sheegay inay korayaan xashiishadeeda
Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka ayaa soo saaray sharci cusub oo mamnuucaya haysashada maandooriyaha...